गोपनीयता नीति | SActivator.com
sactivator.com हामी आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीयता महत्त्वपूर्ण छ भनेर पहिचान. यहाँ हामी प्राप्त र तपाईंले प्रयोग 'जब सङ्कलन व्यक्तिगत जानकारी को के प्रकार मा जानकारी छsactivator.com'र आफ्नो जानकारी हामी सुरक्षित राख्न कसरी.
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी बेच्न कहिल्यै तेस्रो पार्टीहरूलाई.
हामी तपाईं हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्दा विज्ञापन सेवा तेस्रो-पक्ष विज्ञापन कम्पनीहरूले प्रयोग. विज्ञापन राम्रो एक आगन्तुक गरेको प्राथमिकताहरू बुझ्न विज्ञापन कम्पनीहरु द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो कुकीहरू समावेश र सम्बन्धित विज्ञापन प्रदर्शन गर्न तिनीहरूलाई मदत गर्न सक्छ. तर, यो विज्ञापन संग प्राप्त कुकीहरू विज्ञापन कम्पनी संकलित छन् र हामी जानकारी पहुँच छैन. यी कम्पनीहरूले जानकारी प्रयोग गर्न सक्छ (आफ्नो नाम सहित छैन, ठेगाना, इ - मेल ठेगाना, वा टेलिफोन नम्बर) तपाईं सामान र चासो सेवाहरू बारे विज्ञापन प्रदान गर्न यो र अन्य वेबसाइटहरू आफ्नो भ्रमणको बारेमा.
हामी तपाईं हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्दा विज्ञापन सेवा तेस्रो-पक्ष विज्ञापन कम्पनीहरूले प्रयोग. यी कम्पनीहरूले जानकारी प्रयोग गर्न सक्छ (आफ्नो नाम सहित छैन, ठेगाना, वा इमेल ठेगाना) तपाईं सामान र चासो सेवाहरू बारे विज्ञापन प्रदान गर्न यो र अन्य वेबसाइटहरू आफ्नो भ्रमणको बारेमा. तपाईं को सम्बन्ध मा आफ्नो विकल्प जान्न चाहनुहुन्छ यो अभ्यास बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने र·यी कम्पनीहरु प्रयोग यो जानकारी भएको छैन.
घडी भिडियो गोपनीयता नीति बारे
Malwarebytes विरोधी-मालवेयर 3.3.1 प्रिमियम फुट्नु
Cubase लागि 9.5 फुट्नु